Talooyin Ku Saabsan Talooyinka Suuqgeynta Waxtar u leh Ganacsi kasta
Internetka waxaa lagu baddalay ganacsatada, ganacsatada, bloggers, xayaysiinta iyodhammaantood waxay ku tartamayaan dareenkaaga. Sida ugu dhakhsaha badan inta ay ka kooban tahayayaa si tartiib ah u sii kordhaya, waxaa jira boqollaal tiro badan oo ah qalab tayo hoose leh oo muuqdamaalin walba. Waxaa jira ujeedka ah in la sii daayo waxyaabaha hooseeya ee hooseeya si ay "hype" u helaan oo ay u helaanogaaday. Si kastaba ha ahaatee, ganacsi kasta, oo ujeedkiisu yahay koritaanka muddada-dheer,waxaa muhiim ah in laftiisa soo bandhigo waxyaabo tayo sare leh. Waa in aad suuq-gareeysaa ujeedada wax soo saar badan. Julia Vashneva, hogaamiyahakhabiir Semt Adeegyada Dijital ah, wuxuu sharxayaa waxa xeeladaha suuq-geynta ee waafaqsanShirkad kasta oo loo shaqeeyo si ay u guuleystaan.
Aamin Gaar ah
Waxay ku bilaabataa iyada oo abuuraysa wax tayo sare leh. Haddii aad internetka ka shaqeyso, ka dib suuq-geynwaa inuu ahaadaa wadnaha ganacsigaaga. Maaha arrin suuqa ka mid ah,waxa aad iibinayso, iyo maxay tahay qiimaha qiimaha. Sida aad naftaada u soo bandhigi doontoqeexaan sawirka ganacsigaaga, sumcadaada caanka ah, iyo daacadnimada dhagaystayaasha. Online ahaanganacsadaha, waa inaad siisaa macluumaad, fikrado fikradeed oo cadaynaya dhagaystayaashaada.
Halkii ay macaamiishaadu ku hoos gelin lahaayeen cadaadis joogto ah oo ku saabsan xayeysiin ciriiri ah,isku day inaad barato dadka, ka caawinta inay sameeyaan go'aano miyir leh. Ka dhig sida iyaga oo kalecaqli-yaqaanka, iibsadayaasha iyo maal-gashadayaasha, oo aad si cad u kordhineyso iibka.Ku sii wado sameynta content la isku halleyn karo oo wargalin ah. Sidaa darteed, waxaad heli doontaa kalsooniee suuqa aad dooratay. Markaad tahay ilo lagu kalsoon yahay oo badeecado iyo macluumaad ah,talooyinkaagu waxay isku kalsoonaan karaan kordhinta faa'iidada
Isgaadhsiinta dhagaystayaasha waxay lagama maarmaan u tahay dhismaha ganacsi muddo dheer ah. Macluumaadkaagawaxay u taagan tahay codkaaga, taas oo ah qalabka ugu muhiimsan ee ganacsadaha, blogger ama markale.Markaad haysato wax muhiim ah inaad tiraahdo, waa inaad hubisaa inaad maqasho. Go'aansokanaalka ugu waxtarka badan ee tarjumaadda fikradahaaga
Miyaa lagu sheegi karaa 140 jibaaran ama ka yar? Isku day inaad ku fekerto. Ma waxaad u maleyneysaa inay noqon karto blogboostada Ku rid boggaaga, blogka qofkale, sameyso wargeyska dhagaystayaashaada amau soo gudbi wargeyska daabacaadda. Waxaa jira dhowr dariiqo siyaabood oo loo qeybin karo waxyaabahaaga.Ka fikir qofka aad la hadlaysid. Ma yahay dhagayste daaweeye oo YouTube ah? Ama, laga yaabee,Wargeyska ayaa ku habboon? Xusuusnow, waxay ku saabsan tahay habka ugu fiican uguna faahfaahsanoo leh macaamiishaada ama akhristayaasha.
Samee Xiriir Muhim ah
Haddii aad waligaa ka qaybgashay koorso ku saabsan hadalka dadweynaha, soo bandhigista, ama suuq-geynta suuq-geynta,markaas waxaad horeyba u maqashay tan. Weli, looma sheegi karo ku filan. Ogow dhagaystayaashaada.Maxaa lagama maarmaan u ah ganacsigaaga marka loo eego xiriirka aad la leedahaykuwa raacsan? Baro iyaga. Ogoow cidda ay yihiin, waxa ay rabaan, iyo waxa ay yihiinbaahiyaha waa. La xiriir maalin kasta si aad u sii wadatid xidhiidhkiina.
Ka shaqee sheyga maadada oo kordhiya qiimaha akhristaha. Waa inaadHubi in waxyaabaha aad wadaageyso ay ugu dambeyntii faa'iido leedahay. Naftaada dhigkabaha macaamiishaada. Ma jeclaan lahayd in aad waqti u qaadato inaad wax aqriso wax aan muhiim ahayn?Waa hagaag, qofna sidaas ma jeclaan doono. Hase yeeshe, markaad fikrado iyo fikrado aad soo qaadatidMacluumaadka dhagaystayaashaada, waxay si farxad leh kuugu abaal marin doonaan.
Ka qaybgalayaasha dhagaystayaasha
Fadlan maskaxdaada kana fiiri malaa'igta kala duwan ee ku jirta mawduucaaga. Ahaanshaha hal abuur iyoku fakarida sanduuqa ayaa abuuraya isdhexgal xooggan oo lala yeesho dhagaystayaashaada. Intaa waxaa dheer,ha kuu ogaadaan. Magacaaga, sawirkaaga iyo mini-bio soo saar halkaanmaadadaada. Albaabka u fur oo dadka u oggolow. Marka dadku kula xiriiraan sida aqofku, waxay u badan tahay inay dhagaystaan ​​waxa aad tiraahdo
Dabcan, dhammaan xirfadahan waxay noqdaan qayb ka mid ah istaraatiijiyada suuq-galkaaga ah sida waqtigatagaa. Waa inaad raacdaa fikradahaas si joogto ah si aad u noqotid hogaamiye xirfadeed.Dhammaan macaamiisha Sare waxay ogtahay in tayada maadada ay tahay maalgelin muddo dheer ahtaas oo ku siinaysa abaalmarin weyn. Codkaagu wuxuu noqonayaa alaabta ugu horeysa ee aad leedahay Source .